‘Ngifuna ukudayisa500 000 wamakhophi’
UMCULI wowokholo uBabo Ngcobo uthi ngeke awangenele amaSABC Crown Gospel Music Awards akulo nyaka Isithombe: SITHUNYELWE
UMCULI wowokholo uBabo Ngcobo uthi ufuna ukudayisa amakhophi awu-500 000 e-albhamu yakhe entsha eminyakeni emithathu.
UBabo, owahlabana ngendondo yeBest Gospel Artist of the Year kumaSABC Crown Gospel Music Awards ngonyaka odlule, ukhiphe i-albhamu ethi Uhambo 2: Usevele Wakuphinda Loko.
“Siqale umkhankaso wokuthi umculo siwuyise ebantwini. Sizohambela kuzona zonke izindawo futhi ngemuva kweminyaka emithathu sifuna kube sesidayise awu-500 000. I-albhamu yami edlule kaThixo Mkhululi (Uhambo 1) yadayisa cishe amakhophi angaphezu kuka-120 000 ngenxa yokuthi sasiya ebantwini,” kusho uBabo.
I-albhamu yakhe inamacwecwe amabili anezingoma ezingu-30.
“Ngikhipha njalo ngemuva kweminyaka emithathu. Ngaphambi kwe-albhamu edlule bengikhiphe ethi Udeliwe. Ngithe angenze izingoma eziwu-30 ukuze nginikeze abalandeli bami okwanele ngoba iminyaka emithathu yisikhathi eside. Ngenze izingoma eziyisidingo sabantu hhayi abakholwayo kuphela kodwa nabangakhonzi,” kuchaza uBabo.
Uthe ngeke awangenele amaCrown kulo nyaka ngoba adinga isikhathi ukuze asabalalise i-albhamu yakhe.
“Ngeke ngingenele ngaphandle uma bezongiqoka bona eminxeni enjengeyombhali ovelele ngoba kuyakhathaza ukukhankasa. Kudinga isikhathi kanti okwamanje ngisaphusha i-albhamu. Ngonyaka ozayo ngizobuyela ngiyothatha izindondo zami.”
Ngesikhathi ewina ngonyaka odlule wahlomula nangomklomelo wokuya phesheya.
“Yimi engacela ukuthi bahlehlise uhambo lwami ngoba bengimatasa ne-albhamu futhi benginemicimbi engiqashwe kuyo obekungeke kwenze umqondo ukuthi ngiyishiye. Ngizoya ekuqaleni konyaka ozayo phesheya.”